ပြောပြချင်တဲ့ အကြောင်းတွေ.. | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
ရောက်ပါတယ်ဗျား။ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း ဆုံကြတော့မယ်ဆိုတော့ အရမ်းဝမ်းသာနေမယ်ထင်ပါတယ်။ အားလုံးကို သတိရပါတယ်။
အမေရှိတုန်းက ညနေ အမေ ကျောင်းက ပြန်အလာ ညနေခင်း အချိန်တွေမှာ ကိုယ်က ကြောင်လေးတွေအကြောင်း .....................ကြောင်မချစ်သူများ ဖတ်နေတာကို ဒီတင် ရပ်ကြပါ။
ဟိုဌာနက လာ မဖမ်းကြသေးဘူးလား ဟင်... ဖုန်းဆက်တုန်းက လိပ်စာ မပြောမိလိုက်လို့လား။ ဖုန်းနံပါတ်ကနေ လိပ်စာ ပြန်ရှာလို့ရတယ် မဟုတ်လား။ အဟီး... (ခြိမ်းခြောက်နေပြန်ပြီ)
ဒါနဲ့ ကြောင်ချီးကိစ္စ ဘယ်လို ရှင်းသလဲ။ အဲဒါလေး သိချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ကြောင်မွေးဖူးတယ်။ အမြီးကောက်လေးတွေ။ အကောင်လည်း ထွားတယ်။ ကြောင်အမေကြီးက ကားအောက်မှာ အိပ်နေတုန်း ကားကြိတ်ပြီး သေသွားရှာတယ်။
ချိုသင်းရယ်… တပြုံးပြုံးနဲ့ ဖတ်လာလိုက်တာ နောက်ဆုံးစာပိုဒ်လေးရောက်တော့ ချက်ချင်းမျက်ရည်ဝဲမိတယ်…
ကြောင်အန်တီရေ… အိမ်မှာလဲ ကြောင်အန်ကယ်နဲ့ ကြောင်သားသား သားအဖရှိတယ်… အိုးဘားမားနဲ့ တွေ့ ရအောင် လာလည်ဦးမှထင်တယ်… အိမ်မှာ ကြောင်မရှိပေမယ့် အောက်ထပ်အိမ်က ကြောင်လေးကို သားက ညနေကျောင်းကပြန်လာရင် မှီးမှီ စားပြီးပြီလားလို့မေးရတာအမော… ချိုသင်းတို့ အိမ် ကြောင်တွေ တပုံကြီးဆို သူသိပ်ပျော်မှာ… ဒီမှာတော့ လမ်းဘေးကြောင်လေးတွေကို သားကြောဖြတ်ပေးတဲ့အဖွဲ့ ရှိတယ်… သားကြောဖြတ်ပြီးသား ကြောင်လေးတွေက နားရွက်မှာ တံဆိပ်လေးတွေနဲ့ …. ဒီမှာက ခွေးတွေသာ အိမ်မှာမွေးကြတာ ကြောင်လေးတွေက လမ်းဘေးမှာ… ဟိုတနေ့ က အသိအိမ်သွားလည်တော့ အဲဒီအိမ်က ညီမလေးက ကြောင်ကျွေးတဲ့အဖွဲ့ ထဲပါတယ်တဲ့… လမ်းဘေးက ကြောင်လေးတွေကို အစာလိုက်ကျွေးတဲ့အဖွဲ့ ဆိုပဲ…
မာမီနဲ့ နေနေတယ် .မိန်းမတောင်ရပြီတဲ့ ဟိဟိ
လမ်းကြောင်လို့ ထင်ပြီးမွေးဖို့ ချောင်းနေတဲ့ အဖြူအနက်ကြားကြောင်ကြီး (ကိုယ့်နောက်ကိုလိုက်လိုက်လာတတ်တယ် )ကလည်း အိမ်နဲ့ ဆိုတာဟိုနေ့ ကမှသိလိုက်ရတယ် အသည်းကွဲနေတယ် ..ရှာအုံးမယ် ..ခုနေတဲ့ရပ်ကွက်ကကြောင်လေကြောင်လွင့်နည်းလိုက်ထှာနော် ...
ကြောင်တော့ သိပ်မချစ်လှပါဘူး။ ချိုသင်းရေးတာ ဖတ်လို့ကောင်းလို့ ဖတ်တာ။ မကျေနပ်ရင် (ကြောင် ၁၂ ကောင် မွေးမှုနဲ့ တိုင်မယ်။) နောက်တခါ ကြောင်အနက်လေး မွေးရင် "မိုးချုပ်" လို့ နာမည်ပေးပါလား။
ဒီနေ့ ဆရာမွေးနေ့ကိုး။ အင်းစိန်အိမ်လေးကို သတိရပါတယ်။
ပြောပြချင်တဲ့ အကြောင်းလေးကို အားရပါးရ နားဆင်သွားတယ် အစ်မ ရေ....
နှင်းလဲ ကြောင်လေးတွေကို အသေချစ်တက်တယ် ....
နိုဝင်ဘာဟာ လွမ်းစရာတွေကောင်းနေသလို ချစ်စရာကြောင်လေးတွေအကြောင်းကို ဖတ်ရတာကလဲ တစ်မျိုးကြည်နူးစရာပါပဲ
ဒိလိုကြောင်ပေါရင်တော့ သူ့အိမ်သွားလည်ဖို့ စဉ်းစားကာ နေရအုံးမယ်။
ကြောင်မချစ်တာ.. မတတ်နိုင်ပါ။ စာတော့ပြီးအောင် ဖတ်သွားတယ်။
ကြောင်မချစ်တာမဟုတ်ပါဘူး အမရယ်.. ချစ်လွန်းလို့ ကစားတာ လွန်လွန်သွားတတ်တာပါ။
ချစ်စရာကြောင်လေးတွေရှိတော့ ကြောင်မမကြီး (ကြောင်များရှိသော မမကြီး) လည်း မပျင်းရတာပေါ့... လွမ်းစရာလည်းဖြစ်တာပေါ့...
ကြောင်မချစ်ပေမဲ့ အန်တီကြောင် အရေးအသားကောင်းတာနဲ့အဆုံးထိ ဆက်ဖတ်လိုက်မိတယ် ..ပျော်စရာ လေးပဲ ။
အိုဗားမားလေး ကိုတော့ တွေ့ ချင်သားရယ် ..
ဘဘဂျီးကို သွားကုတ်ခိုင်းဖို့သင်ပေးချင်လို့ ပါ ..
ဟီးဟီး .. လက်ထိပ်စော် နံ မစိုးလို့ပြေးပြီ နော်
ကြောင်အန်တီ (a) အန်တီကြောင် ...
ဖုန်းဆက်တဲ့ နေရာမှာ ရီလိုက်ရတာ... ခွက်ထိုးခွက်လန်..
ရုံးမှာ ဘလော့ခိုးဖတ်နေတာ သူများတွေ သိကုန်တယ်...
ပူးတေရန်ကုန်အိမ်ကကြောင်တွေက ၁၃ ကောင်အထိ ပွားကုန်တာလေ..
နောက်လဲ ကြောင်တွေအကြောင်များများရေးပါ ကြောင်အန်တီရေ......
အီး..... မချစ်တာ အပြစ်လား.....
ကြောင်မချစ်ပေမယ့် ကြောင်အကြောင်းရေးထားတဲ့ ဒီစာတော့ချစ်တယ်။
အခုထိအရီမရပ်သေးဘူးး ရေးသာရေးနေတာ “အကြီးကောင်တို့များ ခလေးချစ်တတ်တာ တဆိတ်လွန်လွန်းဒယ်” ကိုရီလို့မပြီးနိုင်သေးဘူးးD
တီတီ နေကောင်းနေပါစေ လို့ဆုတောင်းနေပါတယ်
“အကြီးကောင်တို့များ ကလေးချစ်တတ်တာ တဆိတ် လွန်လွန်းတယ်” တဲ့လား....ဟား ဟား ဟား..ရယ်ရတာချောင်းတောင်ဆိုးတယ်..အဟွတ်..အဟွတ်..
ခု အဲ့ဒီကြောင်လေးတွေ အကုန်ရှိသေးလား ချိူသင်းတို့မြို့က ကြောင်ဥပဒေကို ဖျက်မှဖြစ်မယ်ထင်တယ်.အိုဘာမားကိုလည်း မွေးထားတာပဲ.ရမယ်ထင်တယ်..ဟဲ.ကြောင်ချစ်သူမို့
ကြောင်တွေ့တိုင်း ပိတ်ကန်တတ်တဲ့ နန်းညီကို ဖတ်စေချင်လို့ဆိုပြီး ပေးဖတ်လို့ ဒီမှာတင်ရပ် ဆိုပေမယ့် မရပ်ပဲ ဆုံးတဲ့ထိ ဖတ်သွားပါတယ်.. အံ့သြပါ့.. ကြောင်ချစ်သတဲ့.. . 0_o !!
ဒီမှာတော့ ကြောင်မဆိုရင် သားကျောဖြတ်တာ £40 ကျော် ပေးရတယ်။ ကြောင်ထီးကတော့ £30 ကျော်။ ကြောင်ထီးကို neutering လုပ်ရတာက spraying လုပ်ပြီး အပြင်တချိန်လုံးသွားချင်ရင်လိုတယ်။ RSPCA အဖွဲ့မှာ fund တွေရှိတော့တချို့မတတ်နိုင်တဲ့သူတွေလဲ တောင်းလို့ရတတ်တယ်။ ဒီမှာတော့ တအိမ် ဘယ်နှစ်ကောင်မွေးရမယ် မကြားမိပါဘူး။ အိမ်နီးချင်းတွေ ok ရင် ကြောင်တွေ ကိုကောင်းကောင်း care ပေးနိုင်ရင်ပြီးတာပါဘဲ။ ဖြစ်သလိုထားပြီး ဂရုမစိုက်ရင်တော့လဲ တရားစွဲတာခံရပြီး အလုပ်ပါထိခိုက်နိုင်တာပေါ့။ တိရိစ္ဆာန် ညှင်းဆဲရင်တော့သိတဲ့အတိုင်းထောင်ကျမှာပေါ့။ အဲဒီမှာလဲ တူတူဘဲထင်တယ်။
အော် ကြောင် ကြောင်
ဟိုးတရက်ကတင် လမ်းဘေးက ကြောင်သေးသေးလေးကို မနေနိုင် မထိုင်နိုင် ဓါတ်ပုံရိုက်လာသေးတယ်။ ကြောင်သေးသေးတွေ တွေ့ရခဲတယ်။
ကလေးဘ၀က ကြောင်ချစ်ပေမယ့် နည်းနည်းကြီးလာတော့ မချစ်တော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကြောင်သိပ်ချစ်တဲ့ အမ တယောက်ကြောင့် ကြောင်ဒုက္ခကို ကောင်းကောင်း ခံခဲ့ရဖူးတယ်။ ကြောင်ကို သရဏဂုံတင် မြေမြှုပ်သဂြိုဟ်ပြီး ဆွမ်းကပ်တာ ခင်ဗျားတို့ ကြုံဖူးလား။ ကျုပ်တော့ ကိုယ်တွေ့ပဲဗျို့...။
ညီမလည်း ကြောင်အရမ်းချစ်တယ်။ ၅ ကောင်ဖြစ်လာလို့ ပေးပစ်လိုက်ရတာ။ တကောင်စီလည်း မပေးချင်လို့ မိဘမဲ့ဂေဟာတစ်ခုကို ပေးလိုက်တာ။ လိုက်ပို့တုန်းက သူတို့စားနေကျ ပန်းကန်၊ ရေခွက်နဲ့ အစာထုတ်ပါ ထည့်ပေးပြီး ငိုလိုက်ရတာ။ အခုတော့ ကြောင်မြင်ရင် အတင်းမျက်နှာလွှဲပြီး မကြည့်မိအောင် ကြိုးစားနေရတယ်။ မျက်လုံးချင်းဆုံရင် သနားမိမှာစိုးလို့။
ရေခြားမြေခြားမှာ ကြောင်လေးတွေကို အဖေါ်လုပ်နေခွင့်ရလို့ မိုးစက်တို့မုတ်ဆိတ်တို့ အဖွားက
ဖွားဖွားလည်းအလုပ်တွေ ရှုပ်နေတော့မှာ ကြောင်ဝေယျာဝစ္စတွေနဲ့လေ
အဖော်ပို့လိုက်ပါလား တစ်ကောင်လောက် ...း)
ကြောင်တော့ မချစ်တတ်ဘူး ဒါပေမဲ့ အဆုံးထိ ဖတ်သွားတယ်။
ကြောင်ရယ်၊ ခွေးရယ်၊ လူရယ်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ အချိန်ကာလတခုကို ဖြတ်သန်းလို့ သံယောဇဉ် အမျှင်တန်းလာတဲ့ ခဏမှာ ချစ်ရမြဲပါ။ ဒါကို ဘယ်သူမှ ရှောင်လွှဲလို့ မရပါဘူး။
ဟဟဟ ကြောင်မချစ်ပေမယ့်လဲ ဖတ်သွားပါတယ်။
အိမ်က အိမ်သူ နဲ့ သားသား ကတော့လား ကြောင်
ကိုချစ်လိုက်တာ မှ တုန်နေတာပဲ။
တော်ကြာ ဘယ်က ကြောင်မှန်းမသိ ကျွေးထားလိုက်
တော်ကြာ အဲလို မွေးလိုက် သေ လိုက်နဲ့ ။
ကုလားပြည်က နေအိမ်ပြန်ရောက်တော့ နောက်ထပ် ကြောင်ဝါ တစ်ကောင်ထပ်တိုးနေပြန်ရော။
ကိုယ်က တော့ လိုက်မောင်းထုတ်တယ်။
သူတို့ တွေ က ခေါ်ကျွေးကြပြန်တယ်။
ခက်တာ က တစ်အိမ်လုံး က ခယ်မရော ယောက္ခမကြီးရော ယောက်ဖ ရော က ကြောင်ချစ်ကြတယ်။ ယောက်ဖ က ဆရာဝန်ဗျ။ ထမင်းစားယင် ဇွန်းခက်ရင်းနဲ့ ဒါပေမယ့် လည်း ကြောင်ကျတော့ ဗျာ ဖက်တွယ် လုံးနေလိုက်တာ
အင်း ကိုယ်က တော့ ကြောင်မြင်ယင်တော့ မောင်းထုတ်ချင်နေတာပါပဲ။
ဒါပေမယ့် ခွေး ကို တော့ချစ်တယ်။
နယ်မြို့ လေး မှာ တာဝန်ကျတော့ ခွေးလေခွေးလွင့်
တစ်ကောင် ကိုမွေးထားတာ။ သူက အိမ်ထောင်ကျတော့ ဗျ ဈေးထဲ က နီမ ဆိုတဲ့ ခွေးမ နဲ့ ပွားလာလိုက်တာ အကောင် ၂၁ ကောင်ဖြစ်သွားတယ်။ ဟဟဟဟ
တစ်နေ့ ကို ဆန်ကွဲ တစ်အိုးကြီး ကျိုရတယ်။
ချိုသင်းကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြီ။ အိုဘားမားကို သားအိမ်ထုတ်လိုက်တယ်တဲ့။
ချိုသင်းကိုတော့ ကြောင်တွေနဲ့တင်မက အိုဘားမားနဲ့ပါတွဲပြီး သတိရနေတော့မှာပဲ။
ညည်းက ကြောင်အကြောင်း.ဆက်ရေးတော့ ရီလိုက်ရတာဟာ..
ကြောင်တော့ မချစ်ဘူး ဒါပေမဲ့ အမမချိုသင်းရေးတဲ့စာတွေကို ချစ်လို့ပြီးအောင်ဆက်ဖတ်ပါတယ် ...
ဖတ်ပြီး ကြောင်တောင်နဲနဲချစ်ချင်လာသလိုဖြစ်လာတယ်း)
မစာလေး ဖတ်ရတာ ဝမ်းနည်းဝမ်းသာ အစုံဖြစ်မိပါတယ်။
comment တွေမှာ ကြောင်မချစ်တဲ့ မမ mm လေးများ ဘာရေးမလဲလို့ ရယ်ပြီး လိုက်ရှာမိပါသေးတယ်။ =)
စာဖတ်သူတွေကို ကိုယ်ရဲ့ ဝမ်းနည်းမှုတွေ ကူးစက်သွားမှာစိုးလို့ ပျော်စရာဖက်ပြီး ရေးပေးတာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ စေတနာပါ...
အမရဲ့ကြောင်လေးတွေ အကြောင်းဖတ်ရတာ ရီရတယ်.. ဒါပေမယ့် အမတို့ မိသားစုရဲ့ နိုဝင်ဘာ အမှတ်တရတွေ ဖတ်ရတော့ စိတ်မကောင်းဘူး.. :(
ကျနော်လည်း ကြောင်ချစ်တတ်တယ်အမ.. အိမ်မှာလည်း ကြောင်တွေ ၁၀ ကောင်ကျော်အထိ ရှိဖူးတယ်.. အချစ်ဆုံး ကြောင်လေး တစ်ကောင်လည်း ရှိခဲ့ဖူးတယ်.. တခါတလေကျရင်လေ သူ့ကို သတိရတယ်.. သေသွားတာတော့ ကြာပြီ.. အဲဒီနောက်ပိုင်း ကြောင်တွေ ခွေးတွေဆို ခပ်ခွာခွာပဲ နေဖြစ်တော့တယ်..
to love the animal is important.
(who does not love any animal )
Thank Sayama Moe Cho Thin,
I love you so much just because you are cat lover. Please write more about your cats.
But အစ်မစာတွေကို သဘောကျလို့ ဖတ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာ
အမရေ ....ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ....
အမရေ ကြောင်တော့ မမွေးဖူးဘူး... အမစာတွေ ဖတ်တိုင်း ရသမျိုးစုံ ခံစားရတယ်... အမေလည်း ၃၀ရက် နိုဝင်ဘာမှာ ဆုံးတာ။ သတိရလို့ အဲ့ဒီနေ့မှာ ရန်ကုန် ဖုံးခေါ်တော့ အမေ အိပ်နေတယ်ဆိုပြီး ခေါ်မပေးလို့ စိတ်တိုမိတာ အမေက ဆုံးကာစလေး ဖြစ်နေတယ်။
ချိူသင်းရေ.ကိုဦးနဲ့ မသန္တာဘလော့မှာ ချိူသင်း လွန်ခဲ့တဲ့
နှစ် နှစ်ဆယ်လောက်က ရေးတဲ့ ၀ထ္ထုလေးသွားဖတ်လာတယ်. သူတို့တင်ထားတာတွေ့လို့..
ရေးပြောစရာနေရာလည်းမရှိသေးတော့ ရှိတဲ့နေရာမှာပဲ ရေးလိုက်ပါတယ်..
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကြောင်လေးတွေအကြောင်း အေးအေးဆေးဆေး လာဖတ်သွားတယ်.
ကြောင်သေးသေး ဆော့တတ်တဲ့အရွယ်လေးတွေကို ပိုချစ်ပါတယ်။
ချိုသင်းရေ...ကြောင်မချစ်ပေမဲ့ ချိုသင်းရေးထားတဲ့ ကြောင်အကြောင်းလေးတွေကိုတော့ ချစ်ပါတယ်...။ သူများအိမ်လည်သွားလို့ ကြောင်တွေ့ရင် မြောင်မြောင်...ဆိုပြီးသူတို့တွေရဲ့ မေးစေ့ အောက်ကိုလက်နဲ့သပ်ပေးတိုင်း ခေါင်းလေးမော့ပေးပြီး ဇိမ်ခံတတ်တဲ့ကြောင်လေးတွေကို ခဏလေးတော့ ချစ်မိပါရဲ့၊ ဒါပေမဲ့ မွေးဖို့လောက်ထိတော့ အနွံတာ မခံနိူင်ဘူး ချိုသင်းရယ်။ ကိုယ်တိုင်တောင်မှ စားဖို့ သောက်ဖို့ ရေချိုးဖို့ ကို တွန်းနေရတာ...ဟီးဟီး
ကြောင်မချစ်သူများ ရပ်ရမဲ့နေရာမှာ မရပ်ဘဲ ဆက်ဖတ်သွားပါတယ်။ ကြောင်မချစ်ပေမဲ့ကြောင်မမကို ချစ်တာကိုး (ဟိဟိ ခလေးတွေ လို လိုက်ခေါ်တာနော် စိတ်ဆိုးနဲ့ ) ကြောင်တွေနေရာမှာ ခွေးအစားထိုးပြီးဖတ်လိုက်တယ်။
ရေးတတ်လိုက်တာလို့ပဲပြောရမလား မသိပါဘူးဗျာ။ ကျွန်တော်သာဆို ရေးဖို့စိတ်ကူးပေါ်မိမှာမဟုတ်သလို၊ စိတ်ကူးပေါ်မိပြန်ရင်လည်း “ကျွန်တော့်တွင် ကြောင်နှစ်ကောင်ရှိပါသည်။ တစ်နေ့တွင် ကြောင်ဆယ်ကောင်ပေါက်လာပါသည်...” လို မူလတန်းကျောင်းသား စာစီစာကုံးဆန်ဆန် အရေးအသားလောက်ပဲ ထွက်လာမှာ။ အရေးအသားညက်ညက်လေးနဲ့ ခေါ်သွားတာပဲ တစ်ပုဒ်လုံး။
နောက်ဆုံး စာပိုဒ်လေးကတော့ အကြိုက်ဆုံးပဲ
“အမေသာရှိရင် ကိုယ့်ကို ဘယ်လို ပြန်ပြောမယ် မသိ။
မိုးစက်တို့ မုတ်ဆိတ်တို့အဖွား ကို သနပ်ခါးပါးပါး နဲ့ ကြောင်လေးတွေကို ပေါင်ပေါ်တင်ရင်း စာဖတ်နေတာများ အိမ်မှာ မြင်ရရင် ဘယ်လောက်ကောင်းလိမ့်မလဲ လို့ စိတ်ကူးယဉ်မိပါသေးတယ်။”
အစ်မရဲ့ Blog ကိုစတွေ့တဲ့နေ့ကပျောက်ဆုံးသွားတဲ့မိတ်ဆွေတစ်ယေက်ကိုပြန်တွေ့ရသလိုပဲ။
ဒီနေ့ Blog စလုပ်တဲ့နေ့၊ အစ်မဆီကိုပထမဆုံးအမှတ်တရနဲ့ပထမဆုံးစာပို့ဖြစ်တာပဲ။
ကြောင်လည်းချစ်တယ်။ ခွေးလည်းချစ်တယ်။ အခု
မုဝမ်နဲ့ ရှောင်ကွေးဆိုတဲ့ ခွေးပုလေးနှစ်ကောင်ရှိတယ်။ အဆောင်မှာထားတော့ သူငယ်ချင်းတွေက သူတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံကြတော့ ခွေးတွေလည်းမျက်စိလည်ပြီး ဘာစကားမှ နားမလည်ဖြစ်နေတယ်။ အခန်းပြန်ေ၇ာက်တာနဲ့ မြန်မာစကားနားလည်အောင် မြန်မာသီချင်း အမြဲဖွင့်ပေးနေရတယ်။ မာဓကစကားတက်ရင်ကောင်းမယ်။
မမရေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေက အမြဲတမ်းဖတ်လို့ကောင်းတယ်။ အခုမှမန့်ဖြစ်ပေမယ့် အရင်ကတည်းက ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ မမကို ညီမ blogl list ထဲ add ထားတယ်။ ခွင့်ပြုမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ လာလည်ပါအုံး။ Post အသစ်လည်းရေးပါဦးနော်။ မမကိုချစ်တဲ့ ဇွန်မိုးစက် :)
ကျွန်တော်တော့ ကြောင်မချစ်တတ်ဘူး ကြောင်မချစ်တတ်တဲ့သူတောင် ခုပို့စ်လေးဖတ်ပြီး ကြောင်တွေကို ချစ်မိသလိုလို စိတ်ထဲခံစားသွားမိတယ်း)
မိုးချိုသင်းဆိုတာ နိုင်ငံခြားရောက်မှကြားဘူးတယ်မြန်မာပြည်တုန်း ကမကြားဘုးဘူးလေ ကိုရဲ့အားနည်းချက်လို့ဘဲ ပြော၇မှာဘဲလေ ဒီလောက်နာမည်ကြီးစာရေး ဆရာတစ်ယောက်ကိုလေ ဒါနဲ့စကားမစပ် အမကအပျိုကြီးထင်တယ်နော် ကျောင်ကိုတော့ မချစ်ပါဘူး လူကိုဘဲချစ်တာပါနော် ဒါ့ကြောင့်ဖတ် လိုက်ပါတယ်ဆုံးအောင်
မမိုးချိုသင်းက သူ့အစ်ကိုကြီးလူပျိုကြီးကို ပြုစုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ နှမလိမ်မာလေးအပျိုကြီးနော်။